Mazda RX-8 2009 (#719500) ကို Chanmyathazi ၿမိဳ့နယ္တြင္ေရ... | CarsDB
Lot Number: #719500
Mazda RX8 2009 model withYangon Licence
သည်ပြီးပြည့်စုံသောအခြေအနေတွင်ရှိသည်။ ၂၀၀၉-၂၀၁၁ ရှားရှားပါးပါးမော်ဒယ်ဖြစ်သောမြန်မာနိုင်ငံတွင်ထူးခြားသည်။ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသောကိုယ်ခန္ဓာအသွင်အပြင်နှင့်ကွဲပြားခြားနားသောစတိုင်ရှေ့မီးနှင့်အတူ Grand Touring ဗားရှင်း။
ဂျပန်မှမြန်မာနိုင်ငံသို့ရောက်ရှိချိန် မှစ၍ ဥရောပသားတစ် ဦး မှပိုင်ဆိုင်သည်။
ကားကိုဒုတိယကားအဖြစ်အသုံးပြုသည်။ တနင်္ဂနွေနေ့တွင်ပိုင်ရှင်ကသာမောင်းနှင်သည်။ ၎င်းတွင်အမှန်တကယ်ကီလိုမီတာ ၈၆၂၀၀ သာရှိသည်။
ဒီဗီဒီ / တီဗီနှင့်နောက်ကင်မရာ
ကားသည်ရန်ကုန်လိုင်စင်နံပါတ် 5F / XXXX ရှိပြီးယခုမန္တလေးတွင်ဖြစ်သည်
ဤသည်ကားထူးခြားသောကားတစ်စီးဖြစ်သည်။ ကားမောင်းရန်ပျော်စရာကောင်းပြီးမိုင်ပေါင်းများစွာအကွာအဝေးနှင့်ကောင်းမွန်သောအခြေအနေတွင်ရှိသည်။ RX8 ဟာအလွန်ပြီးပြည့်စုံပါတယ်။
Mazda RX8 2009 Model with YANGON Licence plate.
Car is in near perfect condition. Unique in Myanmar as it is the rare 2009-2011 model. Grand Touring version with revised body shape and different style headlights.
Owned by one European since it arrived in Myanmar from Japan.
Car has only been driven on weekends. It has only 86200 real kms.
Charcoal Grey leather interior.
Electric driver seat with3memory positions
Automatic transmission (never use for drifting)
DVD / TV and back camera
Car has Yangon license plate 5F/XXXX but is now in Mandalay
Selling only because leaving Myanmar
This isaunique car, fun to drive and in near perfect condition with super low mileage. Rare to find an RX8 so perfect!
Call 09250294041 Burmese or English spoken
CarsDB တွင် ( ဦး/ဒေါ် ) shwe waa မှ ကြော်ငြာတင်ထားသော Mazda RX-8 2009 နှင့်ပတ်သက်၍ စုံစမ်းလိုသည်ဟု ပြောပါရန်။